Indawo yaseshashalazini egcwele ingakhiwa kuphela nge-Hi-End level acoustics. Izinguqulo zendabuko ezingeni eliphansi nelingaphakathi kule nhloso azifaneleki ngezizathu ezihlukahlukene, kufaka phakathi amandla anganele kanye nefomu ejwayelekile. Ngokuqondene namamodeli aphezulu, azizuzisi kuphela izici eziyisisekelo, kodwa futhi anikeza izixazululo ezingezona zendabuko ekugxilweni kwezobuchwepheshe, okwenza kube nesithakazelo kubantu abathanda umculo. Kulo mongo , uhlelo lwe- SMS NS-777 lwesiphakamiso lubonakala luhloniphekile ngisho nangezindinganiso zabameli abakhethekile be-Hi-End. Yiqiniso, akusiyo imishini yokukhiqiza okuzwakalayo nokungalungi, kodwa izinzuzo ezibalulekile zibavumela ukuba babuyisane.
Ulwazi olujwayelekile mayelana nomodeli
Abathuthukisi baseJapane banikeza ama-acoustics angama-3 kusuka ochungechungeni lwe-flagship. Uqobo lwezithethi luhluke ekuqondeni kuma frequencies. Kulesi simo, kunikezwa umsindo onamandla futhi onamandla, futhi ugcwala ngamabhasi ajulile. Uhlelo luhle futhi lungenzeka lokuhlanganiswa nabamukeli abaningi nama-amplifiers. Ngenhlanganisela efanele, umthamo omangalisayo we-chassis nezikhulumi ezinamandla ze-Yamaha NS-777 kuzokwenza ukuthi kutholakale umphumela omuhle we-acoustic futhi ngaphandle kokusebenzisa i-subwoofer esebenzayo. Ochwepheshe batusa ukuthi ukhokhe ngokukhethekile ukukhethwa kwe-amplifier - kufanele, njengenani elincane, izinga elihambisana nekhwalithi kanye nezici, ngaphandle kwalokho amandla okukhulumela azohlala engabonakalwanga.
Umkhiqizi usethe uhlelo oludidiyelwe ngokugcwele amakhono we-acoustic, ukuklama nokukwazi ukuxhumana. Ngesikhathi esifanayo, uhlelo lwe-Yamaha NS-777, izici zazo ezinikezwe ngezansi, luye lwazinikela kwisitayela sendabuko lohlobo:
Ubukhulu - 276 mm ngobubanzi, 1100 mm ukuphakama no-390 mm ngokujula.
Isisindo sekholomu ngu-24.4 kg.
Inombolo yamabutho - 3.
Amandla wokufaka ayi-watts angu-100.
Isilinganiso esiphezulu samandla yi-250 Watts.
Izinga lokumelana ngu-8 ohms.
Uzwela ngu-89 dB.
Izinga eliphansi lemvamisa liyi-30 Hz.
Izinga eliphezulu lemvamisa liyi-35,000 Hz.
Ama-Crossover frequencies angama-1-4 kHz.
Ukuzivikela magnetic - kunikeziwe.
Futhi isimiso kwisethi eyisisekelo esiphelele sinezela ngezesekeli zokulungisa. Esimeni, umsebenzisi uthola ukwesekwa, ama-dampers, ama-washers nezikuluzi.
Kumele kuqashelwe ngokushesha ukuthi izikhulumi azikwazi ukubizwa ngokuthi iselula. Lokhu kufaka okukhulu, okuthatha isikhala esiningi, futhi isisindo saso asikwenzi kube lula uma uhamba. Noma kunjalo, ngenxa yobukhulu bayo obuhle futhi bazuze ikhwalithi elizwakalayo lala ma-acoustics. Ekukhiqizeni izindonga, umenzi wasebenzisa amaphaneli angu-12 mm MDF, futhi izintambo ezizungezile zinikezwa ukuqina kwesakhiwo. Isikhala sangaphakathi sibhekene nobukhona obuncane be-absorber. Kubalulekile ukuphawula ukuthi izikhulumi ze-Yamaha NS-777 zinikezwe izinambuzane eziguquguqukayo kokubili. Ukwakhiwa kwezikhulumi eziphakathi nendawo kuyenziwe ngokuhlanganiswa kwe-PMD's composite. Inhloko ye-SC ivaliwe ema-caps angenayo ipulasitiki, futhi amakhoyili abashayeli bomsindo afakwe ikhebula elingenxantathu.
Ngokuba ukudlala kwamazinga aphezulu kuhlangana ne-tweeter enikezwe i-lens kanye ne-aluminium elincanyana yelungu le-dome. Izihlungi ezihlukanisiwe zenziwa ngamaseli e-electrolytic kanye nama-inductors anesisekelo esisekelwe ku-ferrite. I-unit enkulu ye-bass reflex iyatholakala ngemuva kwezikhulumi. Ngokuphathelene namakholomu wokuklama futhi unokuthile okuziqhayisa ngakho. Nakuba ukusebenza jikelele kukhumbuza indlela yendabuko yezintandokazi, ukutholakala komzimba omnyama we-lacquer womswakama omnyama uletha ama-shade akhe we-premium.
Kuzo zonke izici zomsebenzi we-acoustics kuyadingeka ukuthi uphathe ukhiqizwa okunomthelela we-frequency spectrum kanye nokuhumusha okushelelekile emkhatsini ophansi. Kukhona nokunciphisa ukuzwela ezindaweni zokuhlukaniswa - okungenani kutholakala emaphoyiseni emigwaqo. Abasebenzisi babhala umkhawulo ophansi we-10 dB. Phakathi kokuncintisana komkhiqizo walo modeli, kufanele kuqashelwe ukukhishwa kwamandla amaningi okubambisana, ngenxa yokuthi inzuzo yesithombe esizwakalayo ifinyelelwe. Amaqembu e-classic amakhonsathi ahlukaniswa nokuzalwa kwawo, futhi amabhasi asetshenziswa ngokukhiqiza okukhanyayo, okunamandla nokujulile. I-Yamaha NS-777 acoustics isebenza ngentshiseko, igcizelela yonke imininingwane, kodwa ihamba kuphela ngokuhlanganisa, ikakhulu uma ivula idwala elinzima. Uma sikhuluma ngezindawo ezibuthakathaka zomsindo, ke zingabasezindaweni zokuguquka. Kodwa akukwazi ukusho ukuthi uhlelo luqala ukucaca ngokucacile, ngoba ukuphazamiseka nokuphazamiseka akubhekwa. Amakholomu, kunalokho, adala isithombe sesikhala esenziwe kabusha.
Uhlelo lungathunyelwa emigqeni yonke emithathu, kepha kulokhu kusekhona indawo enkulu yokuthuthukiswa. Ngenxa yalokhu, isamukeli kanye ne-amplifier zisetshenzisiwe. Ngokuqondene neyokuqala, kunconywa ukuba wengeze izikhulumi ngamadivayisi womkhiqizo ofanayo, ikakhulukazi, abaningi bancoma abawamukeli bezintambo ze-RX. Ngesimiso esivumelanisa uxhumano, ungase uzizwe ukungabi khona kwezinsizakalo, kodwa lo mqondo uzoqedwa uma usebenzisa uhlelo lokuhlelwa kwe-bi-amping. Umphumela omkhulu nakakhulu unikezwa yi-Modern NS-777 yesimanje ngenxa ye-auto-amplifier yesiteshi ezimbili ngamandla athembekile. Ngesikhathi esifanayo, kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukukhuliswa okuhlukile, ukuphazamiseka okunye nokuntuleka okukhulu. I-Amplifier iphinde ikhuthazwe ukusebenzisa i-line efanayo ye-Yamaha. Uma uphumelela ngempumelelo, ungafinyelela imininingwane eminingi, nokuthuthukiswa okuphawulekayo ekukhiqizeni amabhasi, kanti ivolumu yekhwalithi yephethini ye-acoustic ngeke ithinteke.
Kungcono kangakanani ukuxhuma ama-acoustics?
Okukhethwa kukho okukhulu ekusetshenzisweni kwama-amplifiers anamandla kungaba yisifundazwe se-bi-amp. Inikeza ukusetshenziswa kwamadivayisi amabili okukhulisa. Kunombono wokuthi ngalokhu kuxhumano, hhayi kuphela amandla we-acoustics, kodwa futhi nezici zayo zekhwalithi, kwanda. Ngakho-ke, kunezindlela ezimbili zokuqalisa lokhu kulungiselelwa - okulungile nokungalungile. Esikhathini sokuqala, isikhulumi ngasinye sixhunywe ku-amplifier ngeziphumo eziqondile ze-Yamaha NS-777. Ukuxhumeka kahle nge-biamp kukhulisa ibanga lesignali ethile noma ingxenye yalo. Ukuhlukaniswa kwe-Strip kuyenziwa kusihlungi sokuqala-amplifier. Inketho yesibili ihilela ukusakaza isignali egcwele ngaphandle kwemingcele ebangeni lezimvamisa. Ukuhlukaniswa kule nkinga kwenzeka kuphela ngesihlungi esakhelwe ngaphakathi, esidlulisa amafomu adingekayo kuzikhulumi.
Okokuqala, abasebenzisi bazisa ikhwalithi yokudlala ibhasi. Le ngqikithi ihluke ekusebenziseni amandla nokukhanya, kepha futhi ngokuningiliziwe. Uma kungenjalo, izici ze-acoustic ziseduze ne-studio yokungathathi hlangothi, futhi, futhi, iyakwazisa abathandi abaningi bomculo. Futhi, i-pluses iyinhlangano yinkimbinkimbi yomsindo. Uma i-Yamaha NS-777 isikhwama isetshenziswa ngendlela efanele nge-receiver kanye ne-amplifier, khona-ke ungathembela ukugcwala kwesithombe somsindo, esingalahlekelwa kancane kancane.
Maka abanikazi bekhwalithi yokwakha ama-acoustic aseJapane. Ukumangala akufanele nje kuphela ukusetshenziswa kwezinto zokuqala, kodwa futhi ukulungiswa kokulingana, ukungabi nokukhubazeka nokuthembeka komzimba omkhulu. Kulesi simo, ungakhohlwa ukuthi i-Yamaha inokuthuthukiswa kwayo okuningi, eyakhiwa ngemikhiqizo yayo. Kulokhu, abasebenzisi babona izinzuzo zamaphondo akhethekile amazinga aphezulu namaphakathi, kanye nokutholakala kwekhwalithi ephezulu ye-PMD.
Kunamaphutha ambalwa, kodwa ayikho. Ngokuthakazelisayo, abanikazi abangekho uphawu lokungaphumeleli okukhulu, ngakho-ke, ukugxekwa ingxenye enkulu kulindeleke. Isibonelo, akubona bonke abanelisekile ngobukhulu obukhulu nesisindo se-acoustics, okungaba ngu-25 kg ikholomu ngayinye. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele kuqala inikeze indawo enomphela yokufakwa kwenkimbinkimbi futhi ivumelane nokusebenza kwayo okumile. Futhi lokhu akusho ukuthi igumbi ngokwalo kufanele livuleke ngokulalela umculo ngezici ze-Yamaha NS-777. Ukubuyekeza, noma kunjalo, phawula amaphuzu amahle kulo mongo. Kumele sihloniphe abakhiqizi baseJapane abanikeza izintambo eziningi zokuqinisa, okusiza umsebenzi wokufaka wabanikazi.
Uhlelo lwe-acoustic luhlinzekwa ngokulinganisa ngama-ruble angu-20-25 ayizinkulungwane. Ngisho nemikhiqizo ephezulu, lokhu kuyigugu lentengo, futhi isithunzi salo modeli siwuhlanganisa ngokuphelele. Uma sikhuluma ngabamncintiswaneni, okokuqala kuyoba yinguqulo "encane" yomugqa ofanayo - NS-555. Yiqiniso, kubiza kancane futhi ulahlekelwa yi-Yamaha NS-777 ngokwemandla, kodwa kubonakala kuhloniphekile ngekhwalithi yokucubungula amabhasi. Okunye okugcwele okuqhubekayo ohlelweni lwe-premium kungadlalwa yi-JBL Loft 50 eyinkimbinkimbi yomculo. Kulesi simo, kokubili ngentengo nangezici, umncintiswano uyathandeka kakhulu. Ukuhlukahluka kuboniswa kuphela ngama-branded and stylistic nuances of ukusebenza kwama-premium audio complexes.
Ngezici eziningi, ama-acoustic aseJapane angasho ukuthi ungumholi ekilasini. Ngokuyinhloko, ngenxa yomsindo wenkampani ngokuxhumeka kwamandla onke namandla aguqukayo. Okwenza abasebenzisi be-Yamaha NS-777 bajabule ngokukhethekile ukulondolozwa kokunemba kokudlala. Njengomthetho, izikhulumi ezinamandla nezikhulu ziphethe kahle izinsika, kodwa zivame ukuba nekhono lokucubungula imininingwane yomculo. Endabeni yokusikisela kuka-Yamaha, ukwehluleka okunjalo akubonwa - ngisho nasezintweni eziphansi umuntu angathembela inkundla yomsindo ogcwele nayo yonke ibanga le-amplitude-frequency range elidalulwe. Ngesikhathi esifanayo, abasebenzisi bathola umphumela omkhulu ngokuhlanganisa ama-acoustics abaneziphakamisi eziphezulu.
Ukusangana self-isethulo: isibonelo sendlela ukulungiselela ezahlukeneyo ezahlukene